६ गर्भ’वती युवतीको टोली लिएर साथीको विवाहमा पुगेका युवकले जबाफ सुनेर सबै चकित, भने के भने त उनले तेस्तो! - Mitho Khabar
६ गर्भ’वती युवतीको टोली लिएर साथीको विवाहमा पुगेका युवकले जबाफ सुनेर सबै चकित, भने के भने त उनले तेस्तो!
June 21, 2021 Mitho KhabarLeaveaComment on ६ गर्भ’वती युवतीको टोली लिएर साथीको विवाहमा पुगेका युवकले जबाफ सुनेर सबै चकित, भने के भने त उनले तेस्तो!
बिहे चलि’रहेका बेला बिहे समा:रोहमा एक जना युवक आए । उनको साथमा ६ जना युवती थिए र ती सबै गर्भ’पती थिए । ती युवकले ती सबै ६ यु’वतीको पेटमा हुर्कि’रहेका बच्चाको पिता आफू रहेको बताए ।
द सनका अनुसार प्रिटी माइक नाम’का यी व्यक्ति अहिले अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा छाएका छन् । उनका तस्वीर सामा’जिक संजालमा भाइरल भइर’हेका छन् । प्रिटी माइउक नाइजेरियाका अुन् र उनी प्लेब्वायको रुपमा चर्चित छन् । यस’अघि पनि उनको बेला’बेलामा निकै चर्चा भएको थियो ।
२०१७ मा महिला:हरुको आपत्ति’जनक फोटो पोस्ट गरेको अभियोगमा उनी पक्राउ पनि परेका थिए । अहिले उनी ५ जना गर्भव’ती युवती लिएर आफ्ना एक साथीको बिहे:मा पुगेका थिए ।
उनका साथी विलि’यम्स उचेम्बाको बिहे कार्यक्र’ममा सहभा:गी हुन उनी ६ जना गर्भ’वती युवती लिएर गएका थिए । उनी यसरी गएपछि बिहेमा बेहुला बेहु’ली भन्दा प्रिटी धेरै चर्चामा रहे । सामा’जिक संजालमा प्रिटी माइकले आफूले सबैभन्दा राम्रो जीवन बाँचि:रहेको र यो कुनै अभिनय ट्रिक नभए’को बताएका छन् ।
इन्स्टाग्रा’ममा केहीले उनले बिहेमा सबै चर्चा बटुलेर बेहुला बेहुलीको मजा खराब गरिदिएको भनेका छन् । प्लेब्वाय’का रुपमा चर्चित माइक आफ्ना यस्ता तस्वीर सामा’जिक संजालमा पोस्ट गरिर’हन्छन् । इन्स्टाग्राममा उनका ३ लाखभन्दा धेरै फलोअ:र छन् ।डिसी नेपाल
बिहे नगरी छोरीकी आमा बनिन्त नायिका कल्की